Ahoana ny hevitrao momba ny tsy mpino - Church of the World Switzerland of Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-03 > Ahoana ny hevitrao momba ny tsy mpino?
Mametraka fanontaniana manan-danja aminao aho: Ahoana ny fihetseham-ponao amin'ny tsy mpino? Mino aho fa izany no fanontaniana tokony hofantarintsika rehetra! Chuck Colson, mpanorina ny Fison Fellowship any Etazonia, dia namaly an'io fanontaniana io tamin'ny alàlan'ny fampitoviana toy izao: «Raha misy jamba mandia tongotrao na mamoaka kafe mafana noho ny lobakao, tezitra ve ianao? Namaly izy fa tsy izahay, satria jamba tsy afaka mahita izay eo alohany ».
Azafady, tadidio fa ny olona mbola tsy nantsoina hino an'i Kristy dia tsy afaka hahita ny fahamarinana eo imasony. «Ho an'ireo tsy mino, izay andriamanitr'izao tontolo izao, dia nanamaizina ny saina fa tsy mahita ny hazavana mamirapiratra amin'ny filazantsaran'ny voninahitr'i Kristy, izay endrik'Andriamanitra» (2 Korintiana 4,4). Saingy amin'ny fotoana tena mety, dia manokatra ny mason'izy ireo ara-panahy ny Fanahy Masina mba hahitany. «Ary izy (Jesosy Kristy) manome anao manana maso manazava ny fo mba hahitanao ny fanantenana niantsoana azy, ny haren'ny voninahitry ny lovany ho an'ny olona masina » (Efesiana 1,18). Ireo ray amandrenin'ny fiangonana dia niantso ity hetsika ity ho "fahagagana amin'ny fahazavana". Rehefa mitranga izany dia mety ho lasa mino ny olona. Mino izy ireo satria afaka mahita azy ireo amin'ny mason'izy ireo izao. Na dia misy aza ny olona sasany, na dia eo aza ny mason'izy ireo, misafidy ny tsy hino, ny finoako ny ankabeazan'izy ireo dia handray tsara ny fiantsoana mazava an'Andriamanitra amin'ny fiainany. Mivavaka aho fa hanao izany tsy ho ela izy ireo fa tsy ho avy mba hahafahany miaina ny fiadanam-po sy fifaliana amin'ny fahafantarana an 'Andriamanitra ary hanambara amin'ny hafa momba an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao.
Mino izahay fa ekentsika fa ny tsy mpino dia manana hevitra diso momba an'Andriamanitra. Ny sasany amin'ireo hevitra ireo dia vokatry ny ohatra ratsy avy amin'ny Kristianina. Ny hafa kosa dia avy amin'ny hevitra tsy mitombina sy maminavina momba an'Andriamanitra izay re nandritry ny taona maro. Ireo fiheverana diso ireo dia mampivoatra ny fahajambana ara-panahy. Ahoana no fihetsikantsika ny tsy finoan'izy ireo? Mampalahelo fa izahay kristianina dia mihetsika amin'ny fananganana rindrina fiarovana na ny fandavana mafy aza. Amin'ny fananganana an'ireto rindrina ireto dia haintsika ny zava-misy fa ny tsy mpino dia manan-danja amin'ny Andriamanitra mpino. Adinontsika fa tsy tonga ho an'ny mpino fotsiny ny Zanak'Andriamanitra, fa ho an'ny olona rehetra.
Raha nanomboka ny fanompoany teto an-tany Jesosy dia tsy nisy kristiana - tsy mpino ny ankamaroan'ny olona, ​​eny fa na dia ny Jiosy tamin'izany fotoana izany aza. Saingy tamin'ny fisaorana dia naman'i mpanota i Jesosy - mpisolo vava ho an'ny tsy mino. Hoy izy: "Tsy ny mahery ilain'ny dokotera fa ny marary" (Matio 9,12). Nanolo-tena hitady ny mpanota very i Jesosy mba hahafahan'izy ireo manaiky sy ny famonjena natolony azy ireo. Nandany ampahany betsaka tamin'ny fotoanany niaraka tamin'ny olona izay noheverina ho tsy mendrika sy tsy nomen'ny hafa izy. Ny mpitondra fivavahan'ny Jiosy àry dia nanisy tombo-kase an'i Jesosy ho "amboadia sy mpisotro divay ary naman'ny mpamory hetra sy mpanota" (Lioka 7,34).
Mampita ny fahamarinana amintsika ny filazantsara: «Jesosy, Zanak'Andriamanitra dia tonga lehilahy izay niara-nonina tamintsika, maty ka niakatra; nanao izany ho an'ny olona rehetra ». Milaza amintsika ny andinin-teny fa tian 'Andriamanitra izao tontolo izao. (Jaona 3,16) Midika izany fa tsy olona tsy mino ny ankamaroan'ny olona. Io Andriamanitra io ihany no miantso antsika mpino ho tia ny olona rehetra toa an'i Jesosy. Izany no ilaintsika ny fahitana ny mahita azy ireo ho "tsy mbola mino an'i Kristy" - ireo izay Azy, izay nahafatesan'i Jesosy ary nitsangana. Mampalahelo fa tena sarotra ho an'ny Kristianina maro io. Raha ny fahitana azy dia ampy ny Kristianina vonona hitsara ny hafa. Nanambara izao ny Zanak'Andriamanitra: "Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa ny izao tontolo izao hovonjeny" (Jaona 3,17). Mampalahelo fa mazoto ny mpitsara sasany hitsara ireo tsy mpino ka tsy hadinony tanteraka ny fomba fijerin ’Andriamanitra Ray azy ireo - zanany malalany. Ho an'ireo olona ireo, dia nirahiny ny zanany lahy ho faty ho azy ireo, na dia toa azy aza izy ireo tsy afaka (mbola) nahafantatra na nitia azy. Mety ho hitantsika fa tsy mpino na tsy mpino izy ireo, nefa hitan'Andriamanitra ho mpino amin'ny ho avy. Alohan'ny hanokafan'ny Fanahy Masina ny mason'ny tsy mpino dia nohidiana ny fahajamban'ny tsy finoana - voafitaky ireo foto-kevitra diso momba ny Andriamanitra sy ny fitiavan'izy ireo. Tena ilaina amin'ireo fepetra ireo ny itiavantsika azy ireo fa tsy ny fisorohana na ny fandavana azy ireo. Tokony hivavaka isika fa rehefa manome hery azy ireo ny Fanahy Masina dia hahalala ny vaovao tsara momba ny fahasoavana mihavana Andriamanitra ary hanaiky ny fahamarinana amin'ny finoana. Ireo olona ireo dia mety hiditra ao amin'ny fiainana vaovao eo ambany fitarihan'Andriamanitra sy ny fitondrany ary ny Fanahy Masina dia mety hahafahan'izy ireo mahatsapa ny fiadanana izay omena azy ireo amin'ny maha zanak'Andriamanitra.
Rehefa mieritreritra momba ny tsy mpino isika dia andeha hahatsiaro ny didin'i Jesosy hoe: «Izao no didiko: mifankatiava tahaka ny nitiavako anao (Jaona 15,12). » Ary ahoana no tian'i Jesosy antsika? Amin'ny famelana antsika hizara amin'ny fiainany sy ny fitiavany. Tsy manamboatra rindrina hanasarahana ny mpino amin'ny tsy mpino izy. Milaza amintsika ny Filazantsara fa tian'i Jesosy ary nanaiky ny mpamory hetra, mpanitsakitsa-bady, nanana olona ary boka. Tiany koa ny vehivavy manana laza ratsy, miaramila izay naneso sy nikapoka azy ary ireo jiolahy voahombo tamin'ny hazo teo anilany. Rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy ary nieritreritra an'ireto olona rehetra ireto dia nivavaka izy: «Dada ô, avelao ny helony; satria tsy fantany izay ataony! » (Lioka 23,34). Tian'i Jesosy izy ireo ary ekeny izay rehetra azon'izy ireo mahazo famelan-keloka avy aminy ho Mpamonjy sy Tompony ary mety hiaina amin'ny fifandraisana amin'ny Rainy any an-danitra amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina.
Jesosy dia manome anao anjara amin'ny fitiavany ny tsy mino. Rehefa manao izany ianao dia mahita ireo olona ireo ho fananan'Andriamanitra izay noforoniny sy havotany, na dia mbola tsy fantatr'izy ireo ilay tia azy aza. Raha mitazona izany fomba fijery izany izy ireo dia hiova ny fihetsiny sy ny fihetsik'izy ireo amin'ny tsy mpino. Hanaiky ireo olona ireo izy ireo amin'ny fiadiana misokatra sy ny kamboty ary ny fianakavian'izy ireo izay tsy hahalala ny tena rainy. Amin'ny maha-rahalahy sy anabavy very azy, dia tsy fantatr'izy ireo fa mifandraika amintsika amin'ny alalan'i Kristy. Mikatsaha hihaona tsy mpino miaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra, mba hahafahan'izy ireo mandray ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ihany koa.